Nhau - Kuwedzera Chiitiko cheSJZ CHEM-PHARM CO., LTD-Rwendo rweJiulongtan
Kuwedzera Chiitiko cheSJZ CHEM-PHARM CO., LTD-Rwendo rweJiulongtan
Musi waGumiguru 31, 2019, mumwaka uno wegoridhe wematsutso, SJZ CHEM-PHARM CO., LTD yakaronga vashandi kuti vaite mabasa ekukwira makomo nekusimudzira zviitiko muJiulongtan Scenic Area yePingshan County, Shijiazhuang.
Takatarisana nezuva remangwanani mangwanani, takatanga rwendo kubva kure nemhirizhonga yeguta. Famba mumakomo uye ufeme mweya unozorodza mutsva wezvisikwa. Mukukwira kwekunze kwekunze, hapana munhu akasheedzera kuvava nekuneta, hapana akasara kumashure uye achidzokera kumashure, uye vamwe vaive neushingi vachivavarira nzvimbo yekutanga uye vachishandira pamwe pese pese. Kuneta mukukwira makomo kwakashanduka kuita mufaro wekukunda mukuseka kwakasununguka. Ndichiri kurovedza uye tichifara, zvakanyatsoratidza zvizere hunhu uye mufananidzo wechikwata chedu cheChenbang. Mushure mekukwira, takaenda kubindu remaapuro kunotora zviitiko, tichiravira maapuro achangotorwa kubva mumiti, kuswedera padhuze nemasikirwo uye kunakidzwa nemufaro wekukohwa.
Kutora zviitiko zvekunze zvekunze senge bhiriji, sangano rinoronga kukwira makomo kwevashandi, kunhonga minda yemichero, uye mabiko emanheru, izvo zvinorerusa kumanikidzwa kwebasa revashandi uye kupfupisa chinhambwe pakati pevamwe. Zvinogadzira mikana yekutaurirana pakati pevamwe. Vashandi vadiki vanowana ruzivo rwakawanda kuburikidza neruzivo rwekugovana kwevashandi vakura, uye vashandi vakura vanotapukirwa nehunhu hwevechidiki hwevechidiki. Wese munhu ane nzwisiso nyowani yemumwe uye akasimbisa kubatana kwechikwata cheChempharm.